Tsiafajavona Ambatolampy Nahazo toho-drano vaovao, tantsaha 1.000 no hahazo tombony
Nahazo toho-drano vaovao ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Tsiafajavona distrikan’Ambatolampy. Ny 14 novambra lasa teo no notokanana tamim-pomba ofisialy ny fotodrafitrasa vokatry ny fanampian’ny orinasa Star.
Tantsaha miisa 1.000 no hahazo tombontsoa amin’izany mivantana amin’ny alalan’ny fanamorana ny fampidiran-drano ao amin’ny tanimbary hamboleny. Ahitana vanona (vanne) telo ity toho-drano ity, asa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny volana jolay lasa teo. Tao anatin’ny hafaliana no nandraisan’ny mponin’i Tsiafajavona izany. Ankoatra ity fotodrafitrasa ity dia efa nahazo sekoly EPP vaovao tamin’ny orinasa Star izy ireo niampy dabilio sy seza ho an’ny mpianatra. Ao koa vy lava-drano eny anivon’ny fokontany nahafahan’ny mponina mahazo rano fisotro madio…Tsiahivina fa tafiditra ao anatin’ny asa sosialy entina hanampiana ny mpiara-belona sahanin’ny orinasa Star avokoa izany rehetra izany.